San Htun's Diary: အလုပ်ရှာခြင်း အနုပညာ - ၃
အလုပ်ရှာခြင်း အနုပညာ - ၃
အရမ်းတော်တဲ့ ကျောင်းသားတွေက အမေဇုန်၊ မိုင်ကရိုဆော့ဝ်၊ အိုင်ဘီအမ်၊ ဂူဂယ်တွေမှာ အလုပ်ရကြတယ်။ တဟဲဟဲရယ်နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်ဘော်ဒါ ကမ္ဘောဒီးယား ပန်ဒါလေး ချန်ဒရီယာဟာဆိုရင် Alogrithm နဲ့Database ဘာသာတွေမှာ ဘီမိုင်းနပ်တွေရပေမဲ့ တစ်ပတ်အတွင်း အလုပ်ရသွားလို့အဝေးသင်ကျမှပဲ တစ်ဘာသာအပို ထပ်ယူတော့လို့ကျောင်းက ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ပေါက်ဖော်ကြီး ကျုန်းချိုင်က အသက် ၅၀ လောက် ရှိပြီ ဂျပန်မှာလည်း ၁၅ နှစ် တရုတ်ပြည်မှာလည်း ၁၀ လောက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တော့ သူ့ လုပ်သက်ကတင် တချို့ တရုတ်ကျောင်းသားတွေထက် ကြီးနေသေးတယ်။ တရုတ်ကျောင်းသားအားလုံးက သူ့ ကို တော်တော်လေးစားကြတယ် အလုပ်အတွေ့ အကြုံများပြီး တော်တာကိုး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်က အင်မတန် ဆိုးတယ် တရုတ်အချင်းချင်းတောင် နားမလည်ဘူး။ ESL တီချယ် ကာရိုလိုင်းကို ကျုန်းချိုင်ကို စိတ်ပူတာ အလုပ်ရပါ့မလားလို့။ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သွက်လာအောင် ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆိုရင် သူ့ အိမ်ဖိတ်ခေါ်ပြီး စကားတွေ ပြောခိုင်းတယ်။ တီချယ်မှန်းတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကျုန်းချိုင်ဟာ ၁၀ လ တစ်နှစ်နီးပါးကြာမှ အလုပ်ရတယ်။ ပါကစ္စတန်လေး အူမားဟာ တော်တဲ့အေကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ Fortune 500 တို့ လို အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ကုမ္ဗဏီတွေကိုမှ ရွေးလျှောက်တော့ ၆ လလောက် တော်တော်ကြာမှ အလုပ်ရတယ်။ ၂ လခွဲ၊ ၃ လအတွင်းမှ အလုပ်မရရင် ကျောင်းသားဗီဇာကို ထိန်းရတဲ့အနေနဲ့ကျောင်းကိုပြန်ပြီး စီမီနာသင်တန်း တလတက်ရပါတယ်။ အသိမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း မိသားစုမရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကျတော့ ကျောင်းနားမှာ နေကြပြီး အလုပ်ရှာပါတယ်။ တခါတလေ ကျောင်းက အချိန်ပိုင်း အလုပ်တွေ ပေးတယ်။
မြို့ ကြီးတွေမှာ အလုပ်ရမြန်တော့ ကျောင်းသားအများစုက မြို့ တက်ကြတယ်။ အေကျောင်းသား မိုင်းဖန်က ကျောင်းပြီးပြီးချင်း အလုပ်ရတယ်။ ဆူနမ်၊ ရာမားက ကိုယ်တို့ စီနီယာ နီပေါမှာကတည်းက တဆောင်တည်းအတူနေ၊ တကျောင်းတည်းတက် ညီအစ်မလိုခင်နေတဲ့ မေရီလန်းပြည်နယ် ဘာတီမိုးမြို့ က အက်စမီတာမန်ချေးတို့ အိမ်မှာ သွားနေပြီး အလုပ်ရှာတယ်။ ကမ္ဘောဒီယားလေး ဆမ်နမ်ချန်က သူ့ အစ်မရှိတဲ့ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အတ္တလန်တာမြို့ မှာ သွားနေပြီး အလုပ်ရှာတယ်။ အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီမြို့ မှာ အလုပ်ရနေပြီဖြစ်တဲ့ မိုင်းဖန်က သူ့ ဆီလာဖို့ဘတ်စ်ကားလက်မှတ် ဝယ်ပို့ ပေးတယ်။ ဆူနမ်ကိုလည်း သူ့ ကုမ္ဗဏီမှာ အလုပ်သွင်းပေး၊ သူ့ အိမ်မှာနေခိုင်း၊ သူနဲ့ အတူ ရုံးတက်၊ ပရိုဂရမ်းမင်းမကျွှမ်းတဲ့ ဆူနမ်ကို သင်ပေး။ မိုင်းဖန်တို့ အိမ်မှာ နေထိုင်တဲ့ တလအတွင်း ကိုယ်စားသောက်သမျှကို ဆူနမ်နဲ့ မို်င်းဖန်က အကုန်ခံပါတယ်။ အင်တာဗျူးအတွက် မေးခွန်းတွေကို အေးဂျင့်က ပို့ ပေးလာတော့ တစ်ခေါက်ပဲ ကြည့်ပြီး အိပ်နေလိုက်တယ်။ ကိုယ်တို့ ကျောင်းမှာ သင်တာတွေ၊ အင်တာဗျူးအတွက် ပြင်ဆင်ထားတွေထဲက ဖြစ်နေတာကိုး။ အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီရုံးမှာ ဖြေတဲ့ ကိုယ့်အဖြေလွှာကို ကန်တက်ကီပြည်နယ်က ရုံးဆီ ဖတ်စ်နဲ့ပို့ ပေးတယ်။ နောက်လေးယောက်က ဖုန်းအင်တာဗျူးတော့ သူတို့ ကုမ္ဗဏီအကြောင်း လေ့လာထားလား မေးတော့ မလေ့လာထားဘူး ကိုယ့်မှာ တခြားအင်တာဗျူးတွေ ဖြေနေရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ စင်စင်နာတီမှာ အင်တာဗျူးသွားဖြေဖို့ ကို မိုင်းဖန်က လိုက်ပို့ ပေး၊ ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်မြို့လူတွေ့ အင်တာဗျူးသွားဖို့ အတွက် ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို လိုက်ပို့ ပေး၊ တက်စ်စီခအတွက် ငွေထုတ်ပေးပါတယ်။
ဒီလို ညီအစ်မရင်းနဲ့ မခြား ကူညီတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် အလုပ်ရ မြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းကနေ ထွက်ခွာလာပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ အော်ဖာရပါတယ်။ အော်ဖာလက်တာရတာနဲ့ကျောင်းကို အရင်ပြရတယ်။ တချို့ အော်ဖာလက်တာတွေမှာ အလုပ်ဝင်ပြီးလို့၆ လအကြာမှာ အလုပ်ထွက်ရင် ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာတွေ ကိုယ်တို့ မသိနိုင်တဲ့ အကွက်တွေ အော်ဖာလက်တာမှာ ပါတတ်တာမို့ကျောင်းက စစ်ဆေးပေးပြီး လက်ခံနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောမှ လက်ခံရတာပါ။ အော်ဖာကို လက်ခံပြီးတာနဲ့ job site တွေမှာ တင်ထားတဲ့ စီဗွီတွေကို ဖျက်လိုက်ဖို့ကျောင်းက ပြောလာပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုပေးတဲ့လစာက ပုံမှန်ထက် များတယ် ဒါတောင် သူအရင်ပြောတဲ့ဈေးမဟုတ်တော့ မိုင်းဖန်က အရင်ပြောတဲ့ဈေးအတုိုင်း တောင်းဖို့ ပြောပေမဲ့ ပုံမှန်ထက်တောင် များနေသေးတာမို့မတောင်းတော့ပါဘူး။ တော်ကြာ တိုးတောင်းလို့အော်ဖာမပေးတော့ရင် ဒုက္ခ။ မိုင်းဖန်ဆို ကုမ္ဗဏီက ဟိုတယ်မှာ တလဘွတ်ပေးထားတယ် ပြီးမှ အိမ်ခန်းရှာရတယ်။ တချို့ ကုမ္ဗဏီတွေ relocation assistance ငွေ ထုတ်ပေးတယ်။ မိုင်းဖန်က အဲဒီကုမ္ဗဏီကထွက်ခွာတော့မဲ့ စီနီယာရဲ့ အိမ်ခန်းကိုပဲ ဆက်ယူလိုက်တယ်။ ယူအက်စ်ကျောင်းမှာ တခုကောင်းတာက စီနီယာ၊ ဂျူနီယာအချင်းချင်း ကူညီကြတယ်။ ပြောင်းရွှေ့ ကြေးအတွက်တောင်းတော့ ၅၀၀ ပေးပေမဲ့ အခွန် ၁၅၀ ဆောင်ရလို့၃၅၀ ပဲ ရလိုက်တယ်။ ကန်တက်ကီကိုပြောင်းတော့ ပစ္စည်းသိပ်မများသေးဘူး ယူအက်စ်ကို လာတုန်းကအတိုင်း လက်ကေ့စ်နှစ်အိတ်၊ ဟမ်းကယ်ရီတစ်ခု။ Aroma ထမင်းပေါင်းအိုးလေးကို တကူးတက မှာဝယ်ထားတဲ့ ဆူနမ်က သူက မိုင်းဖန်နဲ့တအိုးတည်း စားနေတာ ကန်တက်ကီကိုရောက်ရင် နင် ပေါင်းအိုးလိုလိမ့်မယ် ယူသွားဆိုပြီး အတင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။
Yayyy ! We graduate !
SA 29 Graduation day Sept 2, 2009 ISS - NUS
ဟုတ်ပါ့ ကန်တက်ကီအိမ်က အမေရိကန်အိမ်ဆိုတော့ fully furnished ပန်းကန်ခွက်ယောက် အကုန်လုံး သူ့ ဟာယူသုံးဆိုပေမဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုး မရှိဘူး။ ဆူနမ်က အဲဒီလို အမြှော်အမြင်ကြီးတယ်။ ဒီလိုနဲ့အလုပ်အသစ်၊ မြို့ အသစ်၊ အိမ်အသစ်၊ လူအသစ်မှာ နေသားတကျဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာ ခြောက်လလောက် ကြာတယ်။ နင်ရှေ့ မှာ သုံးယောက်ဖြုတ်ထားတယ် သတိထား ကြိုးစားနော်လို့တူရကီလေး မူဆာဖာ သတိပေးလာတဲ့နေ့ ကဆို ဖျားချင်သလိုတောင် ဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ ဆူပါဗိုက်ဆာဂျာရတ်က စန်းစန်း နင် အလုပ်ရှာနေလား အမြဲတမ်းအလုပ်အတွက် မန်နေဂျာကို ထောက်ခံပေးမယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာလိုက်တာ။ နောက်တော့ ဘတ်ဂျက်ကြောင့် အမြဲတမ်း မခန့် နိုင်တော့ဘူး ကွန်းထရပ်ကုန်ရင်လည်း ထပ်တိုးမှာ မဟုတ်တော့ အလုပ်ရှာတဲ့ အင်တာဗျူးသွားမယ်ဆိုရင်လည်း ခွင့်ယူလို့ ရတယ်တဲ့။ ကွန်းထရပ်တောင် မကုန်သေးဘူး လေးအော့ဖ်ဖြစ်တော့တာပဲ။ အမေရိကန်ကုမ္ဗဏီအများစုက လေးအော့ဖ်ရင် ကွန်ပျူတာကို မထိနဲ့ တော့ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းပေးပြီး ချက်ချင်းထွက်သွားခိုင်းတတ်တာ အမေရိကန်ထုံးစံပါ။ အဲဒီလို ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကိုယ်ဝမ်းနည်းနေမှာစိုးလို့အိမ်ရှင်အမေရိကန်မ မန်ဒီက သတိပေးပါတယ်။ ဆူပါဗိုက်ဆာတွေနဲ့နေ့ လည်စာစား အေးအေးလူလူရှိတဲ့ ရုံးနောက်ဆုံးရက်မှာ ဝမ်းနည်းပက်လက် ငိုမိတယ် ကန်တက်ကီရုံးကို တွယ်တာနေတာကိုး။ ခုချိန်ထိ ကန်တက်ကီလို့ ကြားတိုင်း ကန်တက်ကီရုံး၊ ကန်တက်ကီမြေကို လွမ်းနေမိတုန်း။ မေရီလန်းကို ရောက်နေတဲ့ ဆူနမ်၊ ရာမားက သူတို့ ဆီမှာ လာနေပြီး အလုပ်ရှာဖို့ ပြောတယ်။ အလုပ်မရှိတဲ့အချိန် အိမ်လခ၊ ကားဆီဖိုး၊ ကား၊ ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ ဖုန်းခ တလတလ လာတဲ့ဘေလ်မှာ အိမ်လခ သက်သာလည်း နည်းလား။ ဒါတောင် ဆူနမ်တို့ က ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခန်းငှားထားတာမို့ခေါ်နိုင်တာ သူတို့ လည်း သူများအိမ်မှာ အခန်းငှားနေရင် ခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ စာမေးပွဲပြီးမှာပဲ မေရီလန်းကို ပြောင်းတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ လေအော့ဖ်ဖြစ်ပြီး ကန်တက်ကီကနေ မထွက်ခွာခင် တလအတွင် လူဝီဗီလ်မြို့ ပဲ အလုပ်တစ်ခု ရတော့မလို ဖြစ်သေးတယ်။
ကန်တက်ကီရုံးက ဆူပါဗိုက်ဆာတွေကို ဖုန်းဆက်လှမ်းမေးတော့ ဆူပါဗိုက်ဆာအကုန်လုံးက ကိုယ့်ကိုထောက်ခံပေးကြတော့ သူတို့ က ကိုယ့်ကို သဘောကျပါရဲ့ ။ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီဗီဇာ စပွန်ဆာပေးဖို့ ကို တွန့် နေတယ် တခါမှ စပွန်ဆာမပေးဘူးတော့ ဆိုတော့လေ။ ကန်တက်ကီပြည်နယ်ရဲ့မြို့ တော်က ဖရန့် ဖွတ်ဆိုပေမဲ့ လူဝီဗီလ်မြို့ က ပိုကြီးတယ်။ တစ်နာရီအဝေး ဖရန့် ဖွတ်မြို့ က အစိုးရရုံးမှာ လူတွေ့ အင်တာဗျူးတော့ အိန္ဒိယသားအင်တာဗျူးသူတွေကို သဘောမကျဘူး။ အော်ဖာကမ်းခဲ့ရင်တောင် လက်မခံဘူးလို့ တွေးတာကို သိလို့ နဲ့တူပါရဲ့အော်ဖာမကမ်းခဲ့ဘူး။ နောက်အော်ဖာတစ်ခုက ထူးထူးဆန်းဆန်း အင်တာလည်း မဗျူးဘဲနဲ့အော်ဖာကမ်းလာတာ လစာလည်း မဆိုးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် ဘယ်ရုံးမှာ အလုပ်ဆင်းရမယ်လို့မပါဘူး။ ကိုယ့်စီဗွီကိုကြည့်ပြီး အလုပ်ခန့် လိုက်တာ သူ့ မှာ အလုပ်မရှိသေးဘူး ကွန်းထရပ်ရတဲ့နေရာကို ဆင်းခိုင်းမဲ့ပုံဆိုတော့ ဆူနမ်တို့ က လက်မခံနဲ့ တဲ့။ လေးအော့ဖ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသုံးဘဲ ကန်တက်ကီရုံးက ကွန်းထရပ်ပြီးသွားလို့အလုပ်ရှာနေတာပါလို့ ပြောရတယ်။ ယူအက်စ် အတွေ့ အကြုံ တစ်နှစ်ရှိပေမဲ့ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီ စပွန်ဆာပေးတဲ့ အလုပ်ရှာရတာ အင်မတန်ခက်တယ်။ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီစပွန်ဆာလို့မေးလိုက်ရင် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းက ဆောရီးကြတာ များတယ်။ တက္ကဆပ်ပြည်နယ် အင်တာဗျူးတစ်ခုက မင်း ကြည့်ရတာ အလုပ်အပြောင်းအလဲ လုပ်ရတာ ကြိုက်ပုံရတယ်နော် တစ်နှစ်ခွဲလောက်ဆို ပြောင်းတယ် သူတို့ က ရုံးမှာ အကြာကြီး လုပ်မဲ့သူ လိုချင်တာတဲ့။ ယူအက်စ်မှာ ကျောင်းတက်ဖို့ အတွက် စင်္ကာပူအလုပ်ကို ထွက်လိုက်တာ၊ ကန်တက်ကီအလုပ်က ကွန်းထရပ်ကုန်သွားလို့အလုပ်အသစ်ရှာနေတာ၊ ဘယ်အလုပ်ပြောင်းချင်ပ့ါမလဲ အလုပ်အသစ်ပြောင်းရတယ်ဆိုတာ စိတ်ပင်ပန်းပါဘိ မြို့ အသစ်၊ အိမ်အသစ်၊ ရုံးအသစ်၊ လူအသစ်၊ technology အသစ်တွေနဲ့အသားတကျဖြစ်ဖို့လွယ်တာမှတ်လို့ ။
ကိုယ်က ကန်တက်ကီရုံးက ပီတာလို လုပ်သက် ၃၅ နှစ် ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ့်မှာ ဒီအခွင့်အရေး မရခဲ့ဘူး။ လူကြီးမင်းတို့လိုချင်တဲ့ အရည်အချင်းနဲ့မကိုက်ညီဘူး ထင်ပါရဲ့ လို့ ပြောတော့ နောက်အလုပ်ပေါ်ခဲ့ရင် ဖုန်းဆက်ပါ့မယ်တဲ့ အော်ဖာကမ်းရင်တောင် လက်မခံချင်ဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး အင်တာဗျူးသူကို စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ရန်တွေ့ တာလည်း ရှိသေးတယ်။ မေရီလန်းက ရာမားတို့ ကုမ္ဗဏီမှာ အမ်းထရူး ဂျူနီယာအလုပ်အတွက် အင်တာဗျူးတာ စီနီယာအဆင့်နီးပါး Security problems တွေမေးလို့ခေါင်းကိုက်ပြီး ပြန်လာတယ်။ မေရီလန်းမှာ လူတွေ့ အင်တာဗျူးသုံးခု ရပါတယ်။ မနက် ၆ နာရီခွဲမှာ တနာရီအဝေးကမြို မှာ ရေးဖြေ။ ကွန်ပျူတာ၊ လူတွေ့ အင်တာဗျူး ဖြေရတယ်။ အင်တာဗျူးဖို့စောင့်နေရင်းမှ အမှတ်တမဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ လား...လား... မနက်က အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ဆွယ်တာကို ပြောင်းပြန်ဝတ်ခဲ့တာကိုး အိမ်သာထဲသွားပြီး ပြင်ဝတ်ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဝါရှင်တန်ဒီစီ ကယ်ပီတန် Capitol နားက ရုံးမှာ အင်တာဗျူးတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးက အရမ်းလှတယ်။ ကိုယ့်အရင်အလုပ်က အတွေ့ အကြုံတွေအကြောင်း တစ်နာရီလောက် ဗျူးတယ်။ အဲဒီရုံးလေးမှာ အလုပ်ရချင်ခဲ့တာ ကိုယ်အရမ်းနှစ်သက်တဲ့ ဆီးနိတ်၊ ဟောက်စ်ရှိတဲ့ ကယ်ပီတယ်ဘေးနားက ရုံးနေရာလေးကို သဘောကျလို့ ။ ၂ လခွဲ၊ သုံးလနေလို့ မှ အလုပ်မရရင် ကျောင်းမှာ ဆီမီနာ ၁ လ ပြန်တက်ရတယ်။ ကျောင်းရောက်ပြီး တစ်ပတ်အကြာမှာ ဝါရှင်တန်ဒီစီရုံးက အော်ဖာကမ်းလာလို့ပြန်ခဲ့ရတယ်။ ဒီစီရုံးကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ကလိုင်းရင့်ဒီအိုအယ်လ် Department of Labor နဲ့ကွန်းထရပ်ထပ်တိုးမတိုး အငြင်းပွားနေတော့ အလုပ်အသစ်မရှိဘဲ အရင်အဟောင်းကိုပဲ ထိန်းသိမ်းရတယ်။ ကိုယ့်ကျောင်းသားဗီဇာက ကုန်တော့မှာမို့လေးဘာသာထပ်ယူပြီး ကျောင်းသားဗီဇာ တစ်နှစ်ထပ်တိုးရတယ်။ အလုပ်ဗီဇာ အဆင်မပြေသေးလို့မဖြစ်မနေ ကျောင်းဆက်တက်နေရတာပါ ကျောင်းတက်နိုင်ကြီးသူ ကျောင်းပျော်ကြီးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ။
Yes ! We can throw our caps after sweating, hardship, sleepless, tried, stressful of burden student life.
One of my proudest thing in my life is NUS alumni.
ဒီအလုပ်က မဟန်ဘူးဆိုပြီး ကိုယ်အလုပ်တွေရှာ၊ အင်တာဗျူးတွေ ဖြေနေခဲ့တယ်။ အောက်တိုဘာမှာ အစိုးရရှပ်ဒေါင်းဖြစ်လို့ရုံးပိတ်လိုက်ရာက အစိုးရရုံးတွေ ပြန်ဖွင့်လာပေမဲ့ ကိုယ်တို့ ရုံး ပြန်ဖွင့် မလာတော့ဘူး လေးအော့ဖ်ပြန်ပြီပေါ့ နှစ်ခါ။ ပထမတခေါက် လေးအော့ဖ်တော့ အင်မတန်ကြောက် စိတ်ပူတာ ဒီတခါတော့ စိတ်မပူတော့ဘူး အေးအေးဆေးဆေးပဲ လာမဲ့ဘေး ပြေးတွေ့ လိုက်မယ် ဟိုကွေ့ ဟိုတက်နဲ့လှော်မယ် ဒီကွေ့ ဒီတက်နဲ့လှော်မယ်။ သုံးလနဲ့အလုပ်မရလို့ကျောင်းပြန်ရလည်း ဘာအရေးလဲ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ နဲ့တွေ့ ရတာပေါ့၊ ကိုယ့်ရဲ့ယူအက်စ် hometown လေးဆီမှာ အနားယူရတာပေါ့။ အဖေနဲ့မကြီးက ပိုက်ဆံအတွက် စိတ်မပူနဲ့သူတို့ပို့ ပေးမယ်တဲ့။ ယူအက်စ်လုပ်သက် နှစ်နှစ်ရှိနေပြီ၊ အင်တာဗျူးပါးလည်း ဝနေပြီဆိုတော့ အခက်အခဲ မရှိတော့ဘူး။ ဘယ်မြို့ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်မှာ ရမှန်းမသိတာက ခက်တယ်။ ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုက အော်ဖာကမ်းချင်သလို။ ကိုယ့်စီဗွီကို monster တွေ့ လို့နယူးယောက်က ကုမ္ဗဏီတစ်ခု လူတွေ့ အင်တာဗျူးချင်တယ်။ ဖုန်းအင်တာဗျူး အရင်ဖြေပြီး အောင်တော့မှ လူတွေ့ အင်တာဗျူးလာမယ်လို့ ။ မနက်ဖက် ဘတ်စ်ကားစီးပြီး နယူးယောက်လာ ညနေဘတ်စ်ကားစီးပြီး မေရီလန်းကို ပြန်ရမှာမို့အဖော်လည်းရအောင်၊ နယူးယောက်ကို မရောက်ဖူးတဲ့ အိမ်ရှင့်တူမကို ဖိတ်ခေါ်တော့ လိုက်မယ်တဲ့။ အင်တာဗျူးရေးဖြေ လာဖြေကြသူတွေထဲမှာ အစောဆုံးပြီးတာ ကိုယ်ပါတဲ့ ကြည့်ရတာ ဘရိုင်ယန်ပါ့ခ်က ရေခဲပြင်စကိတ်ကွင်း၊ အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အဦးတို့ ကို သွားကြည့်ချင်နေတာ နေပါလိမ့်မယ်။ ဘော့စ်အန်နာ့နဲ့လူတွေ့ အင်တာဗျူးတော့ stress အရမ်းများတယ်နော်တဲ့ အဲဒီတုန်းက အလုပ်လိုချင်တော့ လာစမ်းပါ နင်လားဟဲ့ stress ။ ဘယ်လောက်မျှော်မှန်းထားလဲမေးတော့ ဒီစီက ကိုယ့်လစာကို ပြောလိုက်တယ် market rate ဆို အိုကေပါတယ်လို့ ။ တခါတုန်းက အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်နဲ့ရေးဖြေ၊ ဖုန်း၊ စကိုက်အင်တာဗျူးတွေ အောင်ပြီး ဘယ်လောက်လိုချင်သလဲလို့ မေးတော့ လက်ရှိပေါက်ဈေးကို ပြောလိုက်တာ အော်ဖာမကမ်းတော့ဘူး။
တက္ကသိုလ်၊ အန်ဂျီအိုတွေက လစာနည်းတယ် ဒါပေမဲ့ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီ၊ ဂရင်းကဒ်လျှောက်ရင် မြန်တယ်၊ ပိတ်ရက်၊ မီးဖွားခွင့်၊ ကျောင်းတက်ရင်လည်း ထောက်ပံ့သေးတယ်။ ဒီကတည်းက ကိုယ် လိုချင်တာကို မပြောဘဲ နောက်ဆို မင်းတို့ ဖက်က ဘယ်လောက်ပေးဖို့စဉ်းစားထားပါသလဲ။ လက်ရှိပေါက်ဈေးဆို ရပါတယ်လို့ ပြောတော့တယ် ဘယ်သူမဆို လစာများများ လိုချင်ကြတာကြီးပါပဲ။ ကော်လိုရာဒိုမှာဆိုရင် တက်စရာတောင်တွေ အများကြီးကွ မေရီလန်းအိမ်ရှင်ရော၊ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးက နယူးယောက်လို့တိုက်တွန်းကြတာနဲ့ ပဲ Big Apple ၊The city that never sleeps မြို့ က အော်ဖာကို လက်ခံလိုက်လို့နယူးယောက်သူဖြစ်နေတာ တစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ နယူးဂျာဆီဖက်က အိန္ဒိယအေးဂျင့်တွေက သင်တန်းပေး၊ အလုပ်သွင်းပေးမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ ဆီမှာ သင်တန်းတက် သင်တန်းခကို ကိုယ်ကပေးရတယ်။ ပြီးရင် သူတို့ က အလုပ်သွင်းပေးတာ လစာလည်း နှိမ်တယ်။ အလုပ်အရမ်းလိုချင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ သူတို့ ဆီမှာ သင်တန်းတက်ပြီး အလုပ်ဝင်၊ လစာနှိမ်ပြီး မတရားခိုင်းလို့ထွက်ချင်၊ ထွက်ရင်လည်း ဘယ်လောက်လို့စာချုပ်နဲ့ချုပ်ထားတော့ ကျောင်းကနေ ဝင်ကယ်ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေလည်း ရှိတယ်။ ကျောင်းမှာ career job search နှစ်ပတ်သင်တန်း ပေးတုန်းက နည်းပြဆရာက နယူးဂျာဆီပြည်နယ်က အိန္ဒိယရီခရူတာ၊ ကုမ္ဗဏီတွေကို သတိထားလို့သတိပေးဖူးတယ်။ အစိုးရက အလုပ်ဗီဇာလျှောက်ပေးတာတွေကို ကုမ္ဗဏီက အကုန်ခံရမယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်လက်ရှိကုမ္ဗဏီက စာရွက်စာတမ်းသာ တာဝန်ယူတာ၊ ဘာကြေးညာကြေး အကုန် ကိုယ်ပေးရတယ် ဒါပေမဲ့ ဘာဘွန်းမှ မထိုးရဘူး ကြိုက်တဲ့အချိန်ထွက်။ ဆူနမ်ကျတော့ လစာနည်းပြီး ကုမ္ဗဏီကနေ ကျန်းမာရေး အာမခံကြေး ပေးတယ်၊ အလုပ်ဗီဇာ အကုန်ခံတာဝန်ယူ လျှောက်ပေးတယ် ဒါပေမဲ့ အဲဒီကုမ္ဗဏီမှာ ၃ နှစ် လုပ်ရမယ်။ ကိုယ် စင်္ကာပူမှာ ပီအာ၊ ယူအက်စ်မှာ အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီဗီဇာ လျှောက်တော့ ကြုံတွေ့ ရတာတွေ၊ ယူအက်စ်က မာစတာဘွဲ့ ရထားရင် အိတ်ခ်ျဝမ်းဘီ ၆ လ ဖြစ်ရုံနဲ့ဂရင်းကဒ်လျှောက်လို့ ရတော့ ဂရင်းကဒ်လျှောက်ဖို့စီနီယာ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ရှေ့ နေတွေနဲ့မေးမြန်းထားသမျှတွေက နည်းနည်းရှည်မှာမို့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာပဲ တင်ပါတော့မယ်။
အလုပ်ရှာခြင်း အနုပညာ - ၂
အလုပ်ရှာခြင်း အနုပညာ - ၁
လမ်းလျှောက်ရင်း သိခဲ့တာလေးတွေ - ၂
The art of Myanmar Zat-pwe
Lupus - ၂